လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: သာသနာတော်ကို ဂုဏ်တင်နေတာလား၊ ဂုဏ်ချနေတာလား
သာသနာတော်ကို ဂုဏ်တင်နေတာလား၊ ဂုဏ်ချနေတာလား
Labels: ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍, သိသမျှ, အမြင်များ
ကျွန်တော် "ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍" ဆောင်းပါးများကို မတင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပိုင်းခြား တတ်ကြပါစေ။
ယခုအခါ မြန်မာပြည်တွင် သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပါက နတ်ပြကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အကုန်လုံး လိုလိုပင် နတ်မပြရင် သာသနာ့ဘောင်ထဲ မရောက်၊ မဝင်ရဟု မှတ်ထင်နေကြ၍ ဤဆောင်းပါးကို အားလုံးနှင့် အတိုက်အခံလုပ်ကာ ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ တကယ်တမ်း စမ်းစစ်ကြည့်ပါလျှင် ရှင်ပြုလျှင် နတ်ပြကြရမည်ဟု ဘုရားရှင်က လမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရပါ၏။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာများတွင်လည်း ပြဆိုထားခြင်း မရှိပါ။ နတ်ဝါဒီများမှ အစပြုလုပ်ကာမှ အစဉ်အလာဖြစ်သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် မပြုလုပ်ခဲ့သော နတ်ပြခြင်းအလေ့ကို ပုဂံခေတ်တွင် စတင်ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ထိုပုဂံခေတ် နတ်ဝါဒီများက စတန့်ထွင်ခြင်းသာပင် ဖြစ်ပေသည်။
ရှင်ပြုခြင်း အစသည် သားတော်ရာဟုလာမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် သားတော်ရာဟုလာ ရှင်ပြုစဉ်ကလည်း ဘယ်နတ်ကိုမှ မပြပါ။ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးရဲ့ညီအငယ်ဆုံး ရေဝတ ရှင်ပြုစဉ်ကလည်း ဘယ်နတ်ကိုမှ မပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရပြန်သည်။ ရှင်ပြုရာတွင် နတ်ပြရန်လိုအပ်သည်ဟု ဘုရားရှင်က ဟောကြားတော် မူခဲ့ပါသလား၊ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် နတ်မပြဘဲ ရှင်အဖြစ် ရောက်ခဲ့သူချည်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း ဤသို့ နတ်ပြခြင်းကို မပြုလုပ်ပါ။
မည်သို့သော နတ်ကို ပြသနည်းဟု မေးကြည့် စမ်းစစ်ကြည့်ပါက အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာပြည်အနှံ့ နတ်ပြသူတွေ အများကြီးဖြစ်သည် ။ ထိုနတ်တို့က ကိုယ်ပွား မိတ္တူတွေ ပွားထားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နတ်ကလုံးတွေလား။ တစ်ချို့က မိဆိုင် ဖဆိုင်နတ်ကို ပြသည်၊ အချို့က နယ်တော်ရှင်၊ အချို့က ရွာတော်ရှင်၊ အချို့က မိရိုုးဖလာနတ်များကို ပြသည်ဟု အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသည်။ ဘာသာရေးစာပေ အတော်အတန် လေ့လာဖူးသူတွေကတော့ သာသနာတော်စောင့်နတ်၊ သမ္မာဒေဝနတ်တွေကို ပြသခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ အယူအဆ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်ကိို တွေ့ရှိရသည်။
အချို့သော လူကြီးများသည် နတ်မပြရင် ကိုရင် မဝတ်ကောင်းဘူး၊ နတ်ကိုင်တတ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မည်သို့သော နတ်တွေက ကိုင်ကြသနည်း၊ ရွာတော်ရှင်၊ နယ်တော်ရှင်၊ မိရိုးဖလာနတ်တို့သည် သာသာနာတော်သို့သတ်သွင်းသည်ကို နှောက်ယှက်ချင်တိုင်း နှောက်ယှက်လို့ ရပါ၏လော။ ရှင်ပြုခြင်းသည် ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်တွင် စွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဓမ္မရေးရာ လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓမ္မလုပ်ငန်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်ပြုလုပ်လျှင် ကုသိုလ်က စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မည်။ သာသနာရေး ....သာသနာရေးဆိုပြီး လုပ်နေတာတွေက ဘုရားရှင်နှင့် တပည့်သာဝကကြီးများ ဆောင်ရွက်တော် မမူခဲ့တာတွေကို အဘယ်ကြောင့် လုပ်နေကြပါသနည်း။ ရှင်လောင်းကို နတ်ပြတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်ပါဆိုပြီး ပြောနေတဲ့သူတွေဟာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဓမ္မကို ကကြီးခခွေးလောက်တောင် မသိတဲ့ လူတွေပင် ဖြစ်သည်။ တကယ်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အစဉ်အလာကို ထောက်ချင့်ပြီး ရှင်လောင်းကို နတ်မပြတာကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဆိုသင့်ပါသည်။ စာမတတ် ပေမတတ်၊ စာမဖတ် ပေမဖတ်ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်ပြောနေခဲ့ကြတဲ့ သူတွေရဲ့စကားကို တဆင့်စကား တဆင့်မကမ်းကြဖို့ လိုပါသည်။ စာမတတ် ပေမတတ်၊ စာမဖတ် ပေမဖတ်တွေက ရှင်လောင်းကို နတ်ပြတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ပြောနေကြသော်လည်း စာတတ် ပေတတ်၊ စာဖတ် ပေဖတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင် ဓမ္မစရိယ ဦးအေးနိုင်မှ ဤသို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ ပါသည်။ နတ်စင်သွားပြသည့် အယူအစသည် နတ်ကိုးကွယ်မှု တစ်ဖက်စွန်းရောက်သည့် ရှေးလူကြီးများ တီထွင်သည့် ဓလေ့ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လောကုတ္တရာရေးကို လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒီနတ်စင်ပြတဲ့ လောကီရေး အပိုအလုပ်တွေကို လုံးဝမလုပ်သင့်ပါကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
ကျေးဇူးရှင် ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ ဆရာတော်ကြီးမှလည်း ဤသို့ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ " ရှင်လောင်း နတ်ပြတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ရှင်လောင်းနှင့်နတ် ဘယ်သူမြတ်၍ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို လာပြီး ဖူးရမှာလဲ၊ သတိပြုကြပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားလောင်း တောထွက်တဲ့အခါ လူမသိဘဲ နတ်တွေက သိ၍ အကူအညီပေးတာကို အထူးသတိပြုကြီး ရှု့ကြည့်ပါ။ နတ်ပြခြင်းသည် ဗုဒ္ဓသာသနာ အစဉ်အလာ မဟုတ်ပါ။ နတ်သမားတွေက ရှင်လောင်းကို နတ်အောက်ဆွဲသွင်းခြင်းမျှသာပါ။ သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်ခြင်း အလုပ်လို့ မှတ်ပါ။ ရှင်လောင်းကို ဘယ်တော့မှ နတ်မပြပါနဲ့" ဟု ဆုံးမ ဩဝါဒ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
သို့ပါ၍ ရှင်လောင်းကို နတ်အောက် ဆွဲသွင်းနေခြင်းဟာ သာသနာတော်ကို ဂုဏ်တင်နေတာလား၊ ဂုဏ်ချနေတာလား ဟူသည် အသိဉာဏ်ရှိသူတိုင်း စဉ်းစားဝေဖန် ဆုံးဖြတ်သင့်ကြပေသည်။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Thursday, September 25, 2008
နတ်ပြတယ်ဆိုတာ တကယ်ကို မလိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ လွှဲမှားနေတဲ့ ထုံးတမ်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ရှင်ပြုတုန်းကလည်း နတ်မပြပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆရာတော်ဆီမှာ သင်္ကန်းတောင်းပြီး ကိုရင်ဝတ်ခဲ့တာပါ ခင်ဗျ။
September 25, 2008 at 5:14:00 PM GMT+6:30
၎င်း နတ်ပြခြင်း ကိစ္စကို အတိအကျ ကန် ့ကွက်ပါတယ် ။
ဘာမှ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါဘူခင်ဗျာ။အယုံအကြည်လည်းမရှိ
ပါဘူး။ ဆရာတော် ဦးကောသလ ကလည်း ဒီအကြောင်း
က်ို ဟောကြားရှင်းလင်းထားတာရှိပါတယ်။ ဂဃနဏ ရှင်းလင်း ဝေမျှတဲ့ အတွက် ကိုလင်းဦးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျ။:)
September 25, 2008 at 7:34:00 PM GMT+6:30
တကယ်ရေးသင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ထေရဝါဒထဲကို ဟိန္ဒူအယူအဆ၊ တန္တရ မန္တရ၊ ဘိုးတော်မယ်တော်၊ မိရိုးဖလာနတ် စတာတွေ ၀င်ပူးနေတာကို အခုခေတ် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက သတိတရားရှိလာကြ၊ ထုတ်ဖော်ရေးသားလာကြတာ သာသနအတွက် ၀မ်းမြောက်စရာပါ။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဒဘာသာ အမည်ခံ မြန်မာတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ ခံယူထားတဲ့ ထေရဝါဒနဲ့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကျတဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ ဘယ်လောက် အလှမ်းကွာနေတယ်ဆိုတာ နားလည်လာကြဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့ သတိထားစရာတစ်ခုက မဟာယနဗုဒ္ဒဘာသာပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ မဟာယနကျောင်းတိုက်တွေ အင်အားတစ်စတစ်စ ကြီးထွားလာပြီး သက်သက်လွတ်ဗုဒ္ဒသာသနာပြုကျောင်း ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးတွေနဲ့ မဟာယန ကို သွတ်သွင်းဖို့ ကြိုးစားလာတာကိုလဲ သတိပြုမိကြဖို့ လိုပါတယ်။
September 25, 2008 at 9:07:00 PM GMT+6:30
အဋ္ဌကထာ ဋီကာများတွင်လည်း ပြဆိုထားခြင်း မရှိပါ ဆိုလို့ ကိုလင်းဦးက အဌကထာတွေကို မွှေနှောက်ထားတဲ့သဘောလားဗျ။ ပိဋကတ်နဲ့အဌကထာ ဘယ်သင်း ပိုမှန်သလဲဟင်။ ထပ်မေးဦးမယ်။ ကုသိုလ်က လူကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တာလဲ။ ထပ်မေးပါမယ်။ ရှေးလူကြီးတွေက အဲဒီနတ်ပြတဲ့ကိစ္စကို အားအားရှိလက်ယားပြေအောင် လျှောက်ရေးပြီး မှတ်တမ်းတင်သွားတာပေါ့နော်။ အဲဒီနတ်ပြခြင်းနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို သဘောတရားတွေရှိလဲလို့တွေးဖူးသလား။ အဲဒီနတ်တွေကိုရော တကယ်ရှိတယ်လို့ ထင်နေလို့လားဗျ။ လင်းစမ်းပါဦး ကိုလင်းဦးလေးရယ် အဟက်ဟက်။ ကျနော်က စာရေးဆရာမဟုတ်ဘူးနော်။ အဟက်ဟက်။ စာရေးဆရာဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ လာမယှဉ်ပါနဲ့။ သားသားက လူအန္ဓလေးပါ။ အဟက်ဟက်။
September 25, 2008 at 9:38:00 PM GMT+6:30
ခက်တာဘဲ. ကဘေကမာ က လုပ်ခဲ့တာဘဲ။ ဘယ်နဲ.လုပ် မလဲ
September 25, 2008 at 10:00:00 PM GMT+6:30
USER > >ကျွန်တော့်ကို မနာလို မကျေနပ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စော်ကားရင် စော်ကားပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားကို မစော်ကားပါနဲ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လုံးဝလက်မခံပါ။ ဒီက မိတ်ဆွေဟာ ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မိဘကိုးကွယ်လို့ လိုက်ကိုးကွယ်နေတဲ့ အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ရနေပါတယ်။ နတ်ကို ကိုးကွယ်မိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သရဏဂုံပျက်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ သရဏဂုံဆိုတာကိုကော နားလည်ပါသလား။ သရဏဂုံပျက်ရင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တော့ဘူး။ လုံးဝ လုံးဝ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစော်ကားပါနဲ့။ ပိဋိကတ်ဆိုလို့ ပိဋကတ်ကို ဖိသတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ (၃၇)မင်းလို အစိမ်းသေ နတ်တွေကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။
September 25, 2008 at 10:07:00 PM GMT+6:30
ကောင်းတယ်ဗျာ တကယ်လိုအပ်တဲ့ ဝေဖန်ချက်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတာအများကြီးဘဲ
ကိုလင်းဦး ကျွန်တော်လည်း သရဏဂုံတည်ခြင်းနှင့် သရဏဂုံ ပျက်ခြင်းတရားကို နာဘူးတယ်ဗျ။ ဆရာတော်
ရဲ့ဘွဲ့ ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊မိဘ၊ဆရာဆိုတဲ့ အနန္တော အနန္တငါးပါး ကိုဘဲဦးထိပ်ထားပါတယ်။ ဒါကမှလဲ တကယ့်အားကိုးရာအစစ်လေ။ ဒီပိုစ့်လေးက တင်သင့်တဲ့ ပိုစ့်လေးပါဘဲ။
September 25, 2008 at 10:14:00 PM GMT+6:30
ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာရဲ့ ဓလေ့အယူတွေက အရိုးစွဲနေလေတော့ မယူမကောင်း ယူမကောင်းလို့သာ ဆိုရတော့မှာပဲ။ ကျွန်တော် ကိုရင်ဝတ်တုန်းက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးက လုံးဝနတ်မပြခိုင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အယူသီးတဲ့ လူကြီးတွေက ရှိသေးတော့ ကျွန်တော့်မိဘနှစ်ပါးလည်း မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့ မောင်ရှင်လောင်း မြင်ကွင်းတစ်ခုကတော့ အဲဒီလိုပါပဲ။
September 25, 2008 at 10:45:00 PM GMT+6:30
Ko Ko Ye` said...
နတ်ကို မကန်တော့ပါဘူး။ အရိုအသေတော့ ဦးကြီး ဦးလေးတွေလို သဘောထားပေးပါတယ်။ ကိုယ်အရွယ်ရောက်ခင်က ဆုံးပါးသွားတဲ့ လူကြီး သူကြီးတွေလိုပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်လို့တော့ မကျွေးကြော်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ ပြတဲ့ နတ်တွေကလဲ မြို့စောင့်နတ်တို့ ရွာစောင့်နတ်တို့ ဆိုတော့ ဘုရားကိုဖူးဖို့တောင် မမီတာ။ ကို User ရေ ရှေးလူကြီးတွေ ရေးထားတယ် ဆိုတဲ့ ရှင်လောင်းနတ်ပြ သမိုင်းလေးရှိရင် ဖတ်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ နောက် နတ်ပြတဲ့ နောက်ကွယ်က သဘောထားလေးလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျာ။ အကို့ blog မှာများ ရေးထား သေးလား။ ကျွန်တော် အကို Link ကို Click လို့မရလို့ ညွှန်းပေးပါဦး။ နတ်တွေကလဲ တစ်ကယ် မရှိဘူးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေလို့လေ။ Blog မရေးထားလဲ အညွှန်းလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် Mail ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အုန်းသီး ငှက်ပျောသီး အစိမ်းတွေနဲ့ ကန်တော့ပွဲတင်တဲ့ ကိစ္စတွေတင် တော်တော်လေး ပြောဖြစ်ခဲ့ကြဖူးလို့ပါ။
September 26, 2008 at 2:28:00 AM GMT+6:30
အကိုပြောသွားတာတွေက အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ကိုတင်ပြသွားတာ ထေရဝါဒမှာ နတ်မရှိဘူး ပုတီးမရှိဘူး ရှင်ဥပဂုတ္တ မထေရ်မရှိဘူး အကိုရေးထားတာ ကြိုက်တယ်ဗျာ
September 26, 2008 at 12:46:00 PM GMT+6:30
Dr. Nyan said...
ထေရဝါဒအယူမှန်များ လူငယ်များအကြားအသိမှန်ပြန့်ပွားအောင်ဖြန့်ဝေပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျာ။ အခုလူငယ်တွေကနောင်လူကြီးဖြစ်ပြီး အယူမှန်တွေကိုနောက်လူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမှာ
ရဲ့စဉ်းစားဝေဖန်ပိုင်းခြားလက်ခံတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတာ ကျွန်တော်တော့ လက်မခံဘူးဗျ။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ထုံးစံတွေမှာ အယူမှားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ။
နတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြူးဆရာတော်ကြီးဟောကြားတော်မူထားတဲ့သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာမှာအခွေ နားထောင်ကြည့်ဖို့ ဟိုဝေဖန်ရေးဆရာလေးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
September 26, 2008 at 1:30:00 PM GMT+6:30
အမြင့်ကနေအောက်မဆင်းခြင်ရင် အကောင်းဆုံးက ရတနာသုံးပါးဘဲကိုးကွယ်ဖို့ဘဲ နတ်က်ိုးကွယ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ကိုလင်းဦးတင်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကြိုဆိုပါတယ်
September 26, 2008 at 2:15:00 PM GMT+6:30
September 26, 2008 at 5:27:00 PM GMT+6:30
နတ်ကို ကိုးကွယ်မိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သရဏဂုံပျက်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား ဆိုတာကတော့ စာလေးဘာလေး မဆိုစလောက်ဖတ်တဲ့သူလည်း သိနိုင်သလို စာတွေနင်းကန်ဖတ်ပြီး စာပိကျမ်းပိနေတဲ့သူတွေလည်း သိပါတယ်။ အလကားနေ ကျမ်းချည်းအားကိုးနေရင်လည်း မဟုတ်သေးဘူးနော်။ အော် . နတ်ပြတဲ့ဟာက ရှေးလူကြီးတွေ ပါးစပ်ရာဇဝင်နဲ့ရေးသွားတာပါ။ အလကားနေ စာအုပ်ထဲမှာပဲ အသိပညာရှိမယ်လို့ ယူဆရင်တော့ ကျမ်းစာအုပ်ကြီးတွေ လှန်လှောပြီး ရှာချင်ရင်တော့ လိုက်ရှာကြပေါ့နော်။ ကျမ်းမဖတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ်းကို ဖတ်ပြီးရင် ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ပါ။ ကိုလင်းဦးက ကျွန်တော့်ကို မနာလိုလို့ ဆိုပြီး သုံးသွားတာ ကျနော်နားမလည်ပါဘူး။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သေချာသုံးသပ်ကြည့်ရင် ဘလော့ပေါ်က ထေရဝါဒသမားစစ်စစ်ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ အဝေဖန်မခံရဲတာ၊ ဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်ကြတာတော့ တွေ့နေရပါတယ်။ စိတ်ပျက်ပါတယ်။
အော်..နတ်ပြရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို သိချင်ရင် ဆရာသက်လုံဆောင်းပါးတွေ စာတွေ နာနာဖတ်တွေးကြည့်ပါလို့ ဆိုပါရစေ။ ပြီးရင် ကိုယ့်အတွေးခေါ်နဲ့သာ ကိုယ်တွေးကြည့်ပါ သိလာပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ်ဘေးချပြီး ကူးချတဲ့ အသိထက် အများကြီးမြင့်ပါတယ်ဗျာ။
September 26, 2008 at 9:09:00 PM GMT+6:30
ကို USER>> အဲ့ဒါကိုပြောချင်နေတာ။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို မှိုင်းတိုက်နေတဲ့ စာအုပ်တွေကိုသာ ဖတ်နေရင်တော့ လမ်းလွှဲနေတော့မှာပေါ့ဗျာ။ အခုဆိုရင် အဲ့လိုမျိုး ထုတ်နေ၊ရေးနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ဘာသာရေးမှို်င်းးတိုက်ခံနေရမှန်း မသိကြဘူး။
September 26, 2008 at 9:30:00 PM GMT+6:30
ကိုယ့်အသိဉာဏ်တံခါးကို ပိတ်ထားတာ ထေရဝါဒတဲ့လားဗျာ အစွဲကင်းဖို့ ဟောနေပြီး ဝါဒစွဲနေတုန်းလား အဟက်ဟက်
September 26, 2008 at 10:42:00 PM GMT+6:30
ကျနော်တို့နယ်ဘက်မှာလဲ .. အဲဒီအယူကြီးက အခုထိရှိနေတုန်းပဲဗျ။ အများကြီးပဲ နတ်တွေ။ အားလုံးက အမှားကိုလက်ခံထားကြတော့ လူညီ "ဤ" "ကျွဲ" ဖြစ်နေကြတယ်ဗျာ။
September 27, 2008 at 5:10:00 AM GMT+6:30
ကိုလင်းဦးရေ စစ်မှန်တဲ့ ထေရဝါဒ သာသနာတော်
ပြန် ့ပွားရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
နတ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျွန်တော်ကတော့
လွဲမှားစွာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ အယူအဆ လို ့မြင်ပါတယ်။
September 27, 2008 at 5:29:00 AM GMT+6:30
ဒီ post ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ
September 27, 2008 at 4:28:00 PM GMT+6:30
တားမြစ် ထားသော... said...
ကောင်းတဲ့ အယူအဆပါ။ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်သားထားပါ့မယ်။
September 27, 2008 at 5:36:00 PM GMT+6:30
ရေးပြီးမှ ကွန်မန့်တွေ လိုက်ဖတ်လိုက်လို့။ ဟားဟား၊ ဒီလိုတွေ ဆွေးနွေးလာရင် ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျသဗျ။ အသိတွေတိုးတယ်ကိုး။ ကွန်မန့်နဲ့ မပြောကြပဲ ပိုစ့်လေးတွေနဲ့ ပြောကြရင် ပိုလို့ သင့်တော်မလား တွေးမိပါတယ်။
အားလုံုး သောပရိတ်သတ်များ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိပါစေခင်ဗျာ။
September 27, 2008 at 5:46:00 PM GMT+6:30
ပထမတော့ ကွန်မန့်တွေ အများကြီးပဲ။ မရေးတော့ဘူးဆိုပြီးနေ နေတာ။ အလားလား။ မိတ်စာ ဒိထိ တွေကလည်းပါသေးဆိုတော့။ ဖြူးဆရာတော်နဲ့ ပေးတွေ့ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့။
ကိုလင်းဦးရေ.. လေးစားပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်တင်ပါတယ်။
September 27, 2008 at 8:07:00 PM GMT+6:30
>>ကိုရွက်ဝါ>> အခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနှောက်အယှက် မဖြစ်ပါဘူး။
September 28, 2008 at 7:30:00 AM GMT+6:30
ကဲ အားလုံး အားလုံးပဲ တကယ့်ကို ထေရဝါဒစစ်ချင်ပါရဲ့ဆိုရင် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ကအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးကစေတီတွေမှာ ရှိတဲ့ဂြိုဟ်တိုင်တွေကို အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ အရင်ဖြိုချလိုက်ပါဗျာ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော့ မသိဘူး။ အခု ရဟန်းဘွဲ့ပေးရင်တော့ နေ့နံနဲ့ပေးတာကို ကြည့်ပြီး ကြောက်စရာ ဂန္ဓာရီပညာရဲ့လက်တံရှည်ပုံကို အ့ံဩမိပါတယ်။ အဲဒါလေးကိုလည်း ဘုန်းဘုန်းတွေကို မသင့်တော်ကြောင်း သွားလျှောက်လိုက်ပါဦးဗျာ။ နောက်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေ ပရိတ်တွေဘာတွေ မရွတ်ခင် နတ်ပင့်တာလည်း ထူးတယ်နော် ၃၇မင်းမဟုတ်ဘူးဆိ်ုပေမယ့် နတ်ကိုချောင်ထိုးလို့မရဘူးမှလား အရပ်ကတို့ရဲ့။
သားကတော့ နတ်ကို ကိုယ့်ဘော်ဘော်တွေလိုပဲ သဘောထားပါတယ် ရှင်ပြုခါနီးဦးမချပေမယ့် ဟေ့ကောင် ငါတော့ ကုသိုလ်လေးဘာညာလေးပြုတော့မယ် မင်းကိုလာနူတ်ဆက်တာ မင်းလည်း သာဓုခေါ်ရအောင် ငါပေးတဲ့ အမျှလေးလာယူဦီးကွ ဆိုပြီး သွားခေါ်တာပါ။ အဟက်ဟက်။ ကိုလင်းဦးတို့ ကိုရွက်ဝါတို့ ဒေါက်တို ဉာဏ်တို့ ကျေနပ်ပါစေဗျာ။ မကျေနပ်လည်း သားမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ သားကိုပဲ ဝိုင်းဖဲ့နေကြတာကိုးဗျ။ အဟင့်။ ရက်စက်လိုက်ကြတာ။ နောက် မငြင်းတော့ဘူးနော်။ တုတ်ထမ်းငြင်းရမယ့်ကိန်းဆိုက်နေမယ်။ အေးဆေးအေးဆေးနော်။
September 28, 2008 at 10:22:00 PM GMT+6:30
အခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။
ကိုယူဇာရေ.. ကျတော်သိသလောက်ကတော့ နတ်သိကြားနဲ့ ၃၇မင်းနတ် မရောစေချင်ပါ။ နတ်သိကြားဆိုတာက ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ အထက်နတ်ပြည်ကို ရောက်သူတွေပါ။ ၃၇မင်းနတ်ဆိုတာက…….ဘယ်လိုသေလို့ နတ်ဖြစ်တယ်ဆို အားလုံးလဲသိပါတယ်။
September 29, 2008 at 8:34:00 AM GMT+6:30
ရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတော်လူကောင်းဆိုတာ အကြောင်းအရာကိုဘဲဝေဖန်ဆွေးနွေးရပါတယ်။ ကိုယ်ပြောလို့မနိုင်တာနဲ့ဘဲ လူကိုမတိုက်ခိုက်ရပါဘူးခင်ဗျား။ မိကောင်းဖခင်သားသမီးများအားလုံးသိကြမှာပါ။
လို့ဆွဲထုတ်လာတာက ပရိတ်ကြီး၊ ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ဘုန်းဘုန်းတွေအမည်နာမကိစ္စ၊ ဘယ်လိုမှဆက်စပ်လို့
September 29, 2008 at 12:53:00 PM GMT+6:30
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ထက်ဝါကြီးတဲ့သူတွေကို လေးစားသမှုပြုတာပါတဲ့...
ညီမလေးအမြင်ကတော့ ...နတ်ပြတယ်ဆိုတာ ဒီကလေးတွေရှင်ပြုတယ်ကောင်းတာမွန်တာလုပ်ကြပါတယ်...သူတို့ပြုသမျှအတွက်လည်း မိဆိုင်ဖဆိုင်နတ်တွေကို အမျှပေးဖို့ ပြီးတော့ သူတို့လည်းကိုယ်နဲ့ထပ်တူကုသိုလ်ရဖို့အတွက် သူတို့ကိုအသိပေးတာပါ...လူဘုံမှာ မဟုတ်တဲ့သတ္တဝါတွေအတွက် ကုသိုလ်ဆိုတာလူကပေးမှရတဲ့အတွက် လူတွေက အမျှပေးဖို့လိုတယ်လို့ ပြောပြဖူးပါတယ်..
ညီမလေးပြောတာများမှားခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ သူတို့မှာမကျွတ်လို့နတ်စိမ်းဘဝရောက်နေရတာ..ညီမလေးတို့က အမျှပေးပြီးကူညီသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ရှေးလူကြီးတွေလုပ်ခဲ့တာကလည်းအဲသလိုရည်ရွယ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်အစ်ကို..နောက်ပိုင်းကြမှာ နတ်ကိုင်တယ်ဘာတယ်လျှောက်ပြောကြတာနေမှာပါ....
September 30, 2008 at 9:24:00 AM GMT+6:30
Mhaw Sayar said...
သွေးထွက်အောင် မှန်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲ ကိုလင်းဦးရေ.. အလွဲကြီးလွဲတာတွေထဲက အလွဲတစ်ခုပါပဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အလေးအနက်စဉ်းစား လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ.
October 11, 2008 at 3:43:00 PM GMT+6:30
ကို user အချိန်ရရင် ကာလာမသုတ်ကိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်..
၎င်းသုတ္တန်တွင်အချက်(၁၀)ချက်ကို အလွယ်တကူလက်ခံယုံကြည်ခြင်းမပြုဘဲ ခေတ္တထားပြီး
(၁)ဆင့်-တစ်ဆင့်စကားပြောလာသော စကားကိုမယုံနဲ ့အုံး
(၂)ကော-ကောလာဟလ စကားကိုလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၃)စာ-စာအုပ်ထဲက ပြောတိုင်းလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၄)စဉ်-အစဉ်အလာ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် စကားကိုလည်းမယုံနဲ ့အုံး
(၅)ကူး-ဟိုနည်း ဒီနည်း နည်းကူးချပြီးလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၆)တွေး-အတွေးကောင်းတိုင်းမှန်တယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၇)ဆင်-ယုတ္တိများနဲ ့ဆင်ခြေပေးတိုင်းလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၈)ငါ့-ငါ့အယူဝါဒသာမှန်တယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၉)လေး-လေးစားကြည်ညို ထိုက်သောသူ ပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ ့အုံး
(၁၀)ရာ-ငါ့ဆရာပြောတိုင်းလည်း အားလုံးမှန်ပြီလို ့မယုံနဲ ့အုံး
မည်သည့်အယူဝါဒဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်သာလျှင်သိအောင်လုပ်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်
လက်တွေ ့လုပ်ကြည့်လျှင်မှား/မှန် ၊ ဆိုး/ကောင်းကို ကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးမှ
(တစ်ခဏဖြစ်ရ လူ ့ဘဝအနှစ်ပြည့်အောင်ကြိုးစားကြ စာအုပ်မှ)
http://sakarwarmyay.blogspot.com မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
user ပြောတဲ့ ဂန္ဓာရီဆိုတာ ဗေဒင်တို့ ယတြာတို့ကိုပြောတာထင်ပါ့
ဘုရားစင်စစ် ဖြစ်မယ်လို့ဟောတာ ဗေဒင်ပညာပါ
ဒီပညာတွေက ဗုဒ္ဓ မပွင့်ခင်ကတည်းက ရှိနေတာပါ ..
မှန်ပါလိမ့်မယ် ရှေ့ဖြစ်ဟောတာတို့ဘာတို့ ..
ဒါပေမယ့် ဒီပညာတွေကိုလေ့လာ လိုက်စားလို့ တဖက်ကမ်းခတ်ချင်ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်.. သံသရာကလွတ်မြောက်ရာလမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး... တကယ်လို့သာဒီပညာတွေဟာ သတ္တဝါတွေ ကိုအကျိုးရှိစေတယ်ဆိုတာမှန်ခဲ့ရင် သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာဂရုဏာထားတဲ့ ဘုရားရှင်က လေကုန်ခံပြီး တရားဟောခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး..ဒီပညာတွေပဲသင်လိုက်ကြကွာ ..ဆိုတာလောက်ပြောလိုက်ပြီးရော ..ဟုတ်ဖူးလား ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဗေဒင်ဆရာ နတ်ကတော် သိန်းသန်းချီပြီးရှိတာမှန်ပါတယ်.. ဒါဘာဖြစ်လို့လည်း .. user တို့လိုလူတွေအများကြီးရှိလို့ပေါ့ .. ကိုးကွယ်ချင်သပဆိုလည်းကိုးကွယ်ပါ လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်.. ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလာမလုပ်ပါနဲ့ အားလုံက ခင်ဗျားလိုလူတွေ တော့မဟုတ်ကြပါဘူး.
ခင်ဗျားအထင်ကြီးတဲ့ ဂန္ဓာရီ ဗေဒင်ပညာရှင်တွေ ပေါင်းပြီး နာဂစ်စ် မုန်တိုင်းမလာအောင် ယတြာချေ ပေးနိုင်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဗျ..
မသေအောင် ဘယ်နတ်မှ မတတ်နိုင်သလို
သေရင် ကောင်းရာရောက်အောင် ဘယ်ဗေဒင်ဆရာမှ ယတြာချေပေးလို့မရဘူး...
user က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ယူဆလို့ဆက်ပြောပါဦးမယ်
သရဏဂုံ တည်တဲ့လူ ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခေါ်တာပေါ့
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
ဓမ္မံ ။ ။
သံဃံ ။ ။
ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်အား ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် ဆည်းကပ်ပါ၏
တရားတော်မြတ် ကို ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် ဆည်းကပ်ပါ၏
သံဃာတော်မြတ်ကို ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် ဆည်းကပ်ပါ၏ တဲ့ဗျ
ဒီ ၃ ခုကို ကိုးကွယ်တာ ဘာလို့ကိုးကွယ်တာလဲဆိုတော့
သံသရာ ဆင်းရဲကနေလွတ် မြောက်အောင် သင်ပြပေးတဲ့ အတွက်
ဗုဒ္ဓ ကို ဆရာအဖြစ် ကိုးကွယ်ပါတယ်
ှဓမ္မ ကိုတော့ သံသရာက လွတ်မြောက်ရာ လမ်းပြမြေပုံ အဖြစ် ကိုးကွယ်ပါတယ်
သံဃာကို တော့ ဒီ လမ်းပြမြေပုံနဲ့ တူတဲ့ တရားကို ထိ်မ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖြန်ဝေ ပေးလို့ ကိုးကွယ်တာပါ ခင်ဗျာ
ဒီ ၃ခုကို ကိုးကွယ်ရာမှတ်တဲ့လူကို သရဏဂုံ တည်တဲ့လူ ..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်
သရဏဂုံပျက်တာ အခြေအနေ နှစ်မျိုးမှာ ပျက်ပါတယ်
၁။ သေရင် သရဏဂုံ ပျက်ပါတယ်
၂။ ဒီ၃ ခုမှအပ အခြားအရာတစ်ခုခု ကို ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် ဆည်းကပ်တယ် ..ဆိုရင်သရဏဂုံပျက်ပါတယ်
သရဏဂုံပျက်တဲ့လူကို ဘာနာမည်ပဲပေးပေး ..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ပါဘူး
မြန်မာပြည်မှာ ပြောနေကျ နတ်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး အရိုအသေပေးတာ ပါ ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ် ...ပြောချင်သလိုပြောပါ
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ရှိပါတယ်.. ကိုးကွယ်ကြပါ ဒါပေမယ့်
ကို user ဆွေးနွေးချင်သေးသပ ဆိုရင် nsnsing@gmail.com ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပါ..
ခုအစ်ကို လင်းဦး ဘလော့ဂ်မှာ ဆိုတော့ အားနာလို့
ခုလိုဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ user
December 11, 2008 at 3:28:00 AM GMT+6:30
ကိုလင်းဦး အရှင်ဧသိက ရေးတဲ့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့စာအုပ်က နတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ထားပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ရှာလို့ရရင် ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
December 19, 2008 at 10:21:00 AM GMT+6:30
user ဆိုတဲ့ သူရဲ့ comment တွေကိုက သရော်သလိုလို အဆင့်မရှိဘူးတွေ့ရတယ်.အဲလိုပဲ တည့်တည့် ပြောချလိုက်တော့မယ်. မခံနိူင်ရင်လည်းနေဗျာ.ကိုလင်းဦးပြောတာမှန်ပါတယ်..
(၃၇)မင်းနတ်တွေဟာ ထေရဝါဒမှာမပါပါဘူးဆိုတာကို တတ်သိတဲ့ဆရာတော်တွေက သေသေချာချာပြောထားပါရက်နဲ့ အကွန့်တက်ချင်သေးတယ်..ကိုကရော ဘာတွေများလေ့လာထားလို့ သူများပြောတာကို သရော်နေသေးလဲ အဲဒါလဲ အဝိဇ္ဇာပါပဲ
ထေရဝါဒမှာ မပါတဲ့ဟာကို ကိုးကွယ်ရင် ထေရဝါဒမဟုတ်ပါဘူး.ဒါရှင်ရှင်းလေးရယ်.
တကယ်တမ်း သာသနာက်ုိစော်ကားနေတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ ဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့သူတွေပဲ..
အဲလို လိုက်မနာတဲ့ သူထဲမှာ user ဆိုတဲ့သူ မပါအောင်နေပါ.အဲဒါ အကြံပေးလိုက်တာ
ကိုuser ခင်ဗျား တရားတွေ နာလိုက်ဦး..
August 15, 2009 at 5:11:00 PM GMT+6:30
Dear ko lin oo...
i do like ur web.people improve about realigous knowledge and general knowledge.ok thank u very much for vlaue.so i wanna say u don`t care niggling-
person for my work,eg.person as USER .He is not important for u.he also never have value and not need to explain for intelligence-person(USER)
ခင္းမ်ားဆိုက္ဟာ အာလုံးအတကြ္ အသိပညာတေတြိုးရပါတယ္.အကိုမွာလဲဘဲ ကုသိုလ္ရပါတယ္. ရွေ႕ဆက္ျပီးတော့လည္း ဆက္လုပ္ပါဗ်ာ. အရေးမႀကီးတာတေကြို ဂရူးမစို္က္ပါနဲ႔ အကိုက စိတ္ထားျမင့္ျမင့္နဲ႔ ပရဟိတ လုပ္နေတဲ့ အတကြ္ စင္အောက္ကနေ ဘာအဆင့္အတန္းမရွိ ပညာမရွိတဲ့ ယောဆာ(User)လိုလူတေအြတက္နြဲ႔ ခေါင္းစားမနေနဲ႔ ရွင္းျပနေဖို႔လဲ မလိုဘူး ရွင္းျပနေလဲ သူက လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး သူကိုယ္တို္င္လဲ ဘာတစ္ခုမွ ရေရာမွာ မဟုတ္ဘူး ဒါေႀကာင့္ လုံးဝလုံးဝ ခေါက္ထားလိုက္ပါ..
User မကေ်နပ္ရင္ မေးကို အင္ဘိုက္လိုက္ကြာ Nayye889@gmail.com /Face book acc=samsonchen082 ထုံုထိုင္းနေတဲ့ မင္းလိုလူတေအြတကြ္ အမ်ားအတကြ္ ငါ စပါယ္ရွယ္ ရိုက္သငြ္းပေးမယ္ အိုကေတယ္နော္ ဟ ဟ.
August 10, 2012 at 1:01:00 PM GMT+6:30